DFS Xaq ma u leedahay in deeqaha beesha Caalamka ay ka hesho ku wareejiso dad shacab ah? (dhegayso | daawo) – Radio Daljir
Luulyo 21, 2019 8:15 g 0
Dowladda Federaalka Somaaliya ayaa tobaadyadii ugu dambeyeey wadday faragalin qaawan oo ay ku samaynayso Puntland,iyado wixii ka dambeyeey safarkii RW khayre ee Gaalkacyo ay jireen talaabooyin aysan jeclaysan Madaxda Puntland oo ay qaaday DFS.
Xasan Cali khayre Ra’iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka somaaliya ayaa socdaalkiisi Gaalkacyo ugu deeqay Garoonka Kubadda Cagta Cawaale lacag gaaraysa Labo boqol iyo laabatan kun oo dollar,taas oo si kaash ah lagu dhibay Guddiga garoonka Cawaale.
Talaabadas ma noqon mid raali galisa Puntland maadama ay noqotay mid Puntland loo daba maray, abuurtayna khilaaf xoogan uu u dhaxeeya Puntland iyo dowladda dhexe.
Sido kale DFS waxay lacago ku wareejisay Guddiga dhismaha wadada dhexmarta Boosaaso waxaana xiliga wixi ka dambeyeey Puntland xirtay 3 xubnood oo ka tirsan guddiga dhismaha wadadaas oo illaa hadda xiran.
Maanta ayaa Ciidamadda amniga Boosaaso xireen Guddoomiyihi guddiga dhismaha Waddada Boosaaso Sheekh Maxamed Macalin kaas oo malmihii u dambeyeey safaro ku tagay meelo ay kamid yihiin Muqdisho.
Aqoonyahan Cabdulqaadir Cali Saleeban (Camuu) oo Waraysi gaar ah siiyey Radio Daljir ayaan wax ka weydiinay talaabooyinka DFS ee ay ku dhinac marayso Puntland, maadama dalku uu yahay mid federaal ah.
Xaq ma u leedahay DFS inay deeqaha ay beesha Caalamka ka hesho ku wareejiso dad shacab ah.?
Waxaa Su’aalahaas iyo kuwa kale aan waydiinay aqoonyahan Camuu.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 479 Wararka 20774